Adobe Creative Cloud dia efa misy amin'ny Chromebook | Famoronana an-tserasera
Adobe Creative Cloud dia azo alaina ho an'ny Chromebooks ankehitriny
Chromebooks natomboka tamin'ity taona ity dia hanana ny mampiavaka azy afaka miditra amin'ny Google Play Store. Midika izany fa ho afaka hiditra amin'ireo rindranasa sy lalao an-tapitrisany maro ao amin'ity magazay ity izy ireo, izay manokatra ny elanelana amin'ny fahafaha-manao bebe kokoa avy amin'ireo fitaovana avo lenta ireo.
Tsy hijanona eo ihany io, fa i Adobe kosa manambara ny tsy ho ela ny fandefasana ny suite-nao Fampiharana Cloud Creative ho an'ny Chromebooks; fitaovana sasany mihoatra ny nofinidin'ny mpianatry ny oniversite amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao hanampiana azy ireo amin'ny asany.
Mba hanaovana izany, ny orinasa nanova ny fampiharana Android symisy izy ireo ka nohamarinina hampiasaina amin'ny Chromebook voafantina. Ny Chromebooks dia nohajaina bebe kokoa tany amin'ireo anjerimanontolo manerana an'izao tontolo izao, noho izany dia mitombina tokoa ny ifandraisan'ny Adobe amin'ny Google sy ny toerana fanabeazana ho fampidirana azy ireo.
Araka ny tatitra sy fanadihadiana nataon'i Adobe, 85 isan-jaton'ny mpianatra ary 91 isan-jaton'ny mpampianatra no mino fa ny famoronana dia hanana andraikitra lehibe amin'ny asan'izy ireo ankoatry ny kilasy. Ny tsara indrindra dia ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra maimaimpoana ireo fitaovana ireo.
ny Misy ny fampiharana Adobe manomboka anio ao anatin'ny programa beta dia:
Ny tsirairay amin'ireo fampiharana ireo, toy ny Comp CC nandalo teto tato ho ato, natao ho araraoty ny tanjaky ny lampihazo Chromebook, anisan'ireo azo tanisaina amin'ny hafainganana, tsotra ary filaminana. Ity rindrambaiko fihodinana voalohany ity dia manome fototra mafy orina ho an'ny famoronana sy ny matihanina amin'ny zavakanto ho avy hikaroka, hianarana ary hanavaozana amin'ny fomba tsy nisy teo aloha.
Any Etazonia no misy ireto karazana fitaovana ireto mitombo fitomboana sy ny laza, indrindra eo amin'ny habaka mifandraika amin'ny fanabeazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Adobe Creative Cloud dia azo alaina ho an'ny Chromebooks ankehitriny
Ny plugins tsara indrindra hananganana ny tranonkalanao amin'ny Wordpress